Koritaanka Ilmaha Ee Minka Dhaxdiisa ah/ Marxaladaha Uurka |
Ilhaan Ciise Maxamed — December 7, 2018
Caadi ahaan hooyada waxa ey caloosheeda kusidikartaa ilmaha illaa sagaal bilood, inta lagu guda jiro bilahaas oo ey ilmuhu kujiraan caloosha hooyada waxa ey soomaraan heerar kala duwan, waxa eyna kudhax koraan minka hooyada. Waxaa laga yaabaa illaa shanta bilood ee ugu horreysa in eysan warkaqabin hooyadu in ey uur leedahay iyo inkale, marki ey shan bilood soogaarto hooyada waxaa ey dareemeysaa dhaq-dhaqaaqa ilmaha waxaa kale oo macquul ah in ey dareento ama maqasho garaaca wadnaha ee ilmaheeda. Shanta bil ee ugu horreyso waa inta ugu muhiimsan koritaanka ilmaha caloosha kujira.
Marxaladaha Hore marki ey hooyadu uur yeelato oo caloosheedu galaan wax cantuuf kayar waxaa islamarkiiba billaabanto kortitaanka illaa ey noqdaan cad isku dhaggan oo dhinaca culimada caafimaadka uyaqaaniin 90unug oo isku dhaggan. Cadkaas waxaa laggeeyaa gudaha minka,- minka waa muruq adag gudihiiisuna banaan tahay oo eysan waxba kujirin uurka kahor-, kudhawaad labo usbuuc kaddib waxaa billaabanta in ey ukuntu kudhagto darbiga minka. Marxaladda koowaad ee uurka ayaana halkaas kudhamaata.
Marxaladda Labaad ee koritaanka ilmaha, wax ey kasoobillaawataa usbuuca labaad illaa iyo usbuuca sideedaad ee uurka. Biyaha ey ilmuhu kudabaashaan minka dhaxdiisa iyo xuubka difaaca ayaa sameysma marxaladdaan waxa eyna kuhareersamaan ilmaha.
Waxaa sameysma kiish, Kiishkaan waxa uu kakoobanyahay biyo dareere ah, kuwaas oo difaac u ah ilmaha caloosha kujira kana difaaca jugta iyo dhibaatooyinka kudhaca hooyada, sidookale waxa ey u ogalaanayaan in ey ilmuhu udhaqaaqaan dhinackasta sidookale biyahaas waa kuwa ilaaliya heerkulka ilmaha caloosha kujira waa qaddar Alle.
Ibida waa xubin isbedel (waxa ey kaqeyb qaadataa qashinsaarka, waxa ey ilmaha u keentaa nafaqada iyo hawada waxa eyna kafogeysaa wasaqda oo ey dibada usoosaartaa- kaadida ilmaha waxaa lagasoosaaraa ibida iyada oo lagu soodaraayo kaadida hooyada. Ibida waxaa lagu qiyaasaa dhereka tubadeeda 20 ilaa 22 inji.
Maraxaladdaan inta lagu guda jiro, habdhisyada ugu muhiimsan jirka ayaa sameysma sida habdhiska dareen wadka, habdhiska dheefshiidka iyo habdhiska wareegga dhiigga gaar ahaan wadnaha. Ilmaha kujira caloosha hooyada waxaa ku imaan kara dhibaatooyin kaladuwan sida shucaaca, daawooyinka la’isticmaalo iyo kiimikada.
Maraxaldda Seddexaad waxa ey billaabataa dhammaadka bisha 6aad .
Marxalddaan ilmaha aan dhalan waxa ey u egyihiin bini aadam waxa ey leeyihiin madax,gacmo,lugo, iyo cago. Hooyada waxa ey siwanaagsan udareemeysaa dhaqaaqa ilmaha. Waxaana sii soconayo korriinshaha ilmaha yar illaa uu canugga yeesho culeys oo ey siyaadaan kiilooyinkiisa.
Tags: Koritaanka Ilmaha Ee Minka Dhaxdiisa ah/ Marxaladaha Uurka:
Next post Wiil 7 Jir ah oo $22 Milyan Ka Sameeya Youtube-ka
Previous post Waa Maxay Farqiga u Dhaxeeyo Warqada Codsiga Shaqada ‘Cover Letter’ Iyo ‘CV-ga’?